सहरमा नयाँ हिरोइन : सुहाना थापासँग फिल्म, सपना र ‘ए मेरो हजुर ३’
By soniya on	 3rd April 2019 Highlights, अन्तर्वार्ता, समाचार
‘स्टार किड’ हुन पाउनुलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ । तर, सुहाना थापालाई सुन्दा लाग्छ, उनी ‘स्टार किड’भन्दा माथि हुन् । मूभिमान्डुसँग कुरा गर्दा उनमा ‘नेपोटिज्म’ हैन, ट्यालेन्ट र दृष्टिकोण सुनियो । पछिल्लो छिमलकी यी किशोरीसँग ‘ए मेरो हजुर ३’भन्दा धेरै परका गफ भए । फिल्मको भविष्य, बजार र सांस्कृतिक थिचोमिचोका किस्साहरु ।
उनीसँग मार्भलका दर्शकलाई नेपाली हलसम्म ल्याउने सपना छ । उनीसँग ‘ह्या’ भनेर दुत्कार्ने सुकिला दर्शकलाई नेपाली दृश्य भाषा चखाउने सपना छ । अभिनेत्री एवं निर्देशक झरना थापाकी छोरी सुहाना अभिनित ‘ए मेरो हजुर ३’ चैत २९ मा रिलिज हुँदैछ । प्रस्तुत छ विष्णु शर्मासँग सुहानी संवाद :
नयाँ एक्ट्रेसका लागि कति सजिलो वा गाह्रो रै’छ नेपाली फिल्म क्षेत्र ?
यस कुरामा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु । मेरा अभिभावक मूभि इन्डष्ट्रिमै हुनुहुन्छ । डेब्यु मलाई सजिलो भयो । ममीको कारण पनि दर्शकले माया गर्नुभएको छ । आफूलाई लक्की फिल गर्छु । म निकै प्याम्पर्ड (काममा इमान्दार) किड हुँ । सेटमा पनि प्याम्परनेस महसुस हुँदो रैछ । निर्देशक हैन ममजस्तै लाग्ने । कतिपय कुरामा झगडा पनि भयो । एक्टर भएजस्तो प्रोफेसनल बन्नुपर्ने पनि हुन्छ ।
वर्कसपमा हुँदा ममसँग त्यति अन्तक्रिया भएन । सेटमा चाहिँ भयो । छोरीको रुपमा उहाँको कुरा मान्नु आफ्नो कुरा तर, डिरेक्टरलाई यसोउसो भन्न मिल्दैन । मलाई उहाँ सहि लाग्यो । ‘यु आर रङ सुहानी, सी इज राइट, राइट नाउ’ भनेर आफूलाई सम्झाउँथे । धेरै समय ममलाई डिरेक्टरकै रुपमा हेरेँ तर, कतिपय बेला मम भनेरै कुरा गर्न मन लाग्ने रैछ । अनमोल पनि मलाई निकै प्रोफेसनल लाग्यो ।
ए मेरो हजुर ३ तपाईंको जीवन र भावनासँग कति नजिक छ, तपाईंको उमेरका दर्शकले कसरी हेर्लान् ?
आर्या नामक पात्रसँग सम्बन्ध महसुस गरेकी छु मैले । उक्त पात्रको फिलिङ्स ल्याउन मैले मिहेनत गर्नुपरेको थियो । वास्तविकतामा स्टार र फ्यानको रिलेसन भएको निकै कम होला । मलाई एउटा हलिउड स्टारको याद आयो । हाम्रै फिल्ममा पनि एकजना दाई भन्नुहुन्छ : फ्यान फ्यानसम्म मात्र सीमित हुनुपर्छ । यो यथार्थ हो । म रियल लाइफमा चाहिँ कसैको फ्यान भइँन । फस्ट टाइम नै हो, यो रोल गर्न मैले आफूलाई अनमोलको ठूलो फ्यान बनाएँ ।
वर्कसपमा हेर्दा उसलाई हेरिरहने, उसको पिक्चर्ज हेरिरहने, उसको हरेक पोस्ट लाइक गर्ने, भिडियो र मूभिज सबै हेर्ने गर्थेँ । पात्रको लागि मैले उसलाई फ्यानकै रुपमा राखेँ ।
को–एक्टरको रुपमा अनमोलबाट तपाईंले के सिक्नुभयो ? उहाँसँग काम गर्न कति सजिलो वा गाह्रो हुँदो रैछ ?
अनमोल इज भेरी लयल एन्ड डेडिकेटेड । उसको उत्कृष्ट सल्लाह चाहिँ एक्टर्जहरु सँधै इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो मैले रियालिटीमा पाएँ । जब मैले अनेस्ट हुन्थेँ, सुटिङमा उक्त सिन सजिलै पास हुन्थ्यो । सहयोगी पनि छ अनमोल । गोक्योमा सुट हुँदा निकै चिसो थियो । म आफै जुत्ता लाउन सक्दिनथेँ । ऊ आफैले जुत्ता लगाइदियो । हेयर ड्रेसिङ सबै हेरिदिन्थ्यो । को–एक्टर हुन पाउँदा म आफूलाई निकै लक्की मान्छु ।
फिल्मभित्र तपाईं एक्ट्रेस हुनुहुन्छ वा हिरोइन ?
मलाई हिरोइन भन्ने टर्म वा वर्ड मनपर्दैन । पर्सनल्ली म एक्टर मात्र हुँ । एक्टर भएर काम गर्ने हो । हिरोइन भएर ‘बचाओ’ भन्ने पुरानो स्टाइललाई चेन्ज गर्नुपर्छ होला । इन्डष्ट्रिभन्दा पनि अडिएन्स धेरै फरवार्ड भैसके । अहिलेको विश्वमा म आफूलाई हिरोइनभन्दा एक्टरकै रुपमा सोच्छु ।
नेपाली फिल्म कत्तिको हेर्नुभएको छ ?
मैले धेरै नेपाली फिल्म हेरेको छैन । नेपाली फिल्म हेर्न लागेको भनेको अनमोलको होस्टेल लागेदेखि हो । किनभने त्यसले यङस्टरलाई तानेको थियो । ममीको फिल्म ‘म तिमीबिना मरिहाल्छु’ चाहिँ हेरेको थिएँ । अरु चाहिँ हेरेको छैन । यसमा मलाई दुःख छ ।
तपाईंसँग यङस्टरलाई हलसम्म तान्न कस्ता खाले फिल्म बन्न जरुरी छ ?
हाम्रो आफ्नो भन्ने केही छैन । हामी अरुबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छौं । संस्कृतिलाई पनि बिर्सिसक्यौं । न पूर्णरुपमा पश्चिमा छौं न पूर्णरुपमा पूर्वीय । हामी बीचमा छौं । हलिउड, बलिउड र साउथ इन्डियन फिल्मले अर्कै खालको मेकिङ सेट गरिदियो नेपाली दर्शकमा । दुरुस्तै नेपाली निर्माताले त्यो कुरा दिनसक्दैन । मुख्य कुरा, बजार नभएपछि बजेट कसले हाल्न चाहन्छ, चाहँदैन हैन । पहिलो कुरा दर्शकले हामीलाई असेप्ट गर्नु जरुरी छ । उहाँहरुले असेप्ट नगरिकन त मेकर्जले कसरी पैसा हाल्छ त ? मार्भल फिल्ममा गरिने सीजीआइ बराबरको खर्च नेपालले गर्न सक्दैन । त्यति खर्च नगरे फिल्म नै मनपराउँदैनन् । अडिएन्सले माया नगरिञ्जेलसम्म त्यो गुणस्तर आउँदैन ।
अभिनय करियरलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच गराउनुभएको छ ? दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
निश्चितरुपमा म यो उद्योगलाई माया गर्छु । यदि कसैले एकदमै राम्रो स्क्रिप्ट ल्याउनुभयो भने म गर्छु । ए मेरो हजुर ३ एउटा केटा र केटीबीचको सम्बन्धको कथा मात्र हैन, प्रेमलाई भिन्न ढंगले पोएट्रे गरिएको छ । म प्रतिबद्धता गर्छ, तपाईं इन्टरटेन हुनुहुनेछ ।